कोभिड-१९ को महामारी र तनाव - Pabil News
चैत २२ गते, २०७६ - २३:१३
कुनै पनिव अप्ठ्यारो परिस्थितिले मानिसको मनमा आउने अस्थिरता र मानवीय अङ्गहरुले देखाउने प्रतिक्रिया हरु अथवा हाम्रो वरपरको वातावरणमा घटने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कुनै पनि घटनाहरुप्रती मानिसहरूले समय परिस्थिति अनुसार प्रतिक्रिया देखाइरहेको हुन्छन ।
एउटा कुरामा निरन्तर मनले तनाव लिएपछि शरिरले देखाउने प्रतिक्रिया नै तनाव हो । हाम्रो नेपाली समुदायमा एउटा प्रचलित भनाइ छ चिन्ता लिनु भनेको स्वयंम आफुलाइ चिताको बाटो डोर्‍याउनु हो । सानो भन्दा सानो कुराहरुलाइ पनि तिल जस्तो पहाड बनाउने हाम्रो समाजमा परापुर्वकाल देखि रहदै आएको देखिन्छ ।
चिन्ता पनि आवश्यकताभन्दा धेरै लिन थालियो भने विभिन्न प्रकारका मानसिक रोगको सिकार समेत बन्न पुगिन्छ । सानो भन्दा सानो कुराहरुलाइ पनि चिन्ता लिने, ठुलो बनाउने प्राविधि हाम्रो समाजमा रहेको छ ।
जिन्दगीमा अनेक परिस्थितिहरु आइपर्छन् जहाँ हामी स्वयम् आफैलाइ बिर्सेर चिन्तामा डुबिरहेका हुन्छौँ । जब एउटा नराम्रो घटना घट्छ भने त्यतिबेला अनेकौँ सोचहरु मनले सोचिसकेको हुनेछ । विभिन्न भावनाहरु आउँछन् ।
सकारात्मक नकारात्मक दुवै भावनाहरु मन र मस्तिष्कले सोचिसकेको हुन्छ । सबैभन्दा पहिले त आफू अरुको कारण दुखी भएको छु भन्ने सोचलाई दिमागबाट हटाउनुपर्छ । सरकारले लकडाउन गरेपछ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ट्रोल समेत बनाएका थिए । जस्तो– मकै गनेको हाँस्यु गर्दा बिरालो तर्सेर भागेको, हातको इसाराले चुरोट मागेको तर नपाउँदा छटपटी भएको, घरको इँटा गनेको आदि ।
यिनले केही क्षण ‘रिफ्रेस’ बनाउलान् तर यति बेला तपाईंको दिमाग सधैंझैं सामान्य छ त ? पक्कै छैन । लकडाउन फेरि थपिएला कि भन्ने चिन्ता छ तपाईंलाई । कोभिड–१९ को असर कहाँसम्म पुग्ला भनेर सोच्न पनि भ्याउनुहुन्छ ।
घरमा ग्यास सकियो भने के गर्ने भन्ने अर्को समस्या अघिल्तिर तेर्सिहाल्छ । बिहान बेलुका मजदुरी गरेर जिबिकोपार्जन गरेर बसेकालाई त झन रोगले भन्दानी भोकले धेरै पिडा दिन थालिसकेको कुरा गिट्टी कुटि जीवन निर्बाह गर्दै आफ्नो बालबच्चा परिवारलाई पाल्दै आउनु भएको बुवाको छुट्टै कथा छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने तनावले त झनै मानसिक स्थिति नबिग्रेला भन्न सकिँदैन ।
उमेर अनुसारको युवा, वृद्ध, बालकहरुमा समेत कोरोनाको भाइरसको छाप बसेको छ । दुई वर्षको बालकमा समेत कोरोना भाइरसको शब्द मनस्थितिमा बसिरहेको छ । तपाईंलाई जुन परिस्थितिले चिन्ता उत्पन्न भइरहेको छ भने त्यसलाई समेटेर एउटा कथा रचना गर्नुहोस् र आफ्नो कथालाई ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र जुन आफ्नो कथालाई उपयुक्त शिर्षक दिनुहोस् ।
अब तपाईंले कथामा आफुलाइ कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ ? आफुलाइ त्यहाँ कस्तो ठाउमा पाउनुहुन्छ र कथालाई बिस्लेषण गर्नुहोस् । के अब तपाईंको आफ्नो बाँकी जीवन कथाको सत्य पीडित पात्र बनेर जिउन चाहनुहुन्छ ? एक पटक सोच्नुस त । या त तपाईं एउटा सुखद मोड आओस भन्ने चाहनुहुन्छ । कथाको पात्र अथवा आफुलाइ पीडित होइन एउटा हिरो वा बिजेताको रूपमा आफुलाइ उभ्याउन चाहनुहुन्छ ।
लेखक ग्रेनिको भनाइअनुसार जब तपाईंले आफ्नो कथाको बिस्लेषण गर्नुहुन्छ तब तपाईंले आफुलाइ एउटा योद्धाको रूपमा पाउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाइले आफ्नो जीवनको प्राथमिकताहरु सम्झनुस जस्तै तपाईंको जीवनलाई सफल बनाउनको लागि कुन महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यसलाई सम्झिनुहोस र डायरीमा लेख्ने गर्नुहोस् ।
त्यसपछि ती प्राथमिकताहरुलाइ पटक पटक दोहोराएर पढ्नुहोस् । अब आफ्नो बलियो र सकारात्मक पक्षहरुलाई बुँदागत रूपमा टिपोट गर्दै जानुहोस् । ती कुराहरूलाई पनि पटक पटक पढ्नुहोस् । तपाईं अहिलेसम्म आइपुग्दा कुनै गल्ती गर्नुभएको थियो भने पनि ती गल्तीलाई स्वीकार गर्नुहोस् र ती गल्तीबाट सिक्नुहोस् ।
आफ्नो प्राथमिकताबाट बिचलित भएको भए आगामी दिनको लागि योजना बनाउनुहोस् । सम्झनुहोस् कि तपाईंको जिवनको महत्वपूर्ण व्यक्ति तपाईं नै हुनुहुन्छ । तपाईंको जिवनलाई कस्तो रुप दिने तपाईंको हातमा छ । राम्रो बनाउने कि नराम्रो बनाउने भन्ने कुराको आफैले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेखक सकारात्मक प्रेरणा अभियान नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
२०७६ चैत २२ गते प्रकाशित